Wararkii ugu dambeeyay weerarkii dagaalka isku badalay ee Awdheegle iyo Al-Shabaab oo markale laga ceyriyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay weerarkii dagaalka isku badalay ee Awdheegle iyo Al-Shabaab oo...
Awdheegle (Halqaran.com) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysaa dagaal kulul oo maanta Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose ku dhex maray Ciidanka Xoogga Dalka iyo Xoogaga Ururka Al Shabaab.
Dagaalkan ayaa yimid markii weerar ismiidaamin ku bilowday ay Al-Shabaabku ku soo qaadeen saldhig militari, oo dhawaan ay Ciidanka Xoogga Dalka ka samaysteen Degmada Awdheegle. Ciidanka Xoogga Dalka ayaa 7-dii bishan la wareegay gacan ku haynta Awdheegle.
Ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday oo aad u farabadnaa ayaa ujeedkoodu u muuqday inay cagta mariyaan saldhigga, hase ahaayee ay ku fashilmeen, ka dib markii ay iska caabin xoogan kala kulmeen Ciidanka Xoogga Dalka.
Iyadoo uu dagaal qaraar goobtaasi ka socdo ayay gurmad xoogan helayn Ciidanka Xoogga Dalka, waxayna Shabaabkii weerarka soo qaaday ay ku khasbeen in ay dib ugu celiyaan goobihii ay ka soo duuleen.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa guulo ka sheegtay dagaalka faraha looga gubtay ee ka dhacay Degmada Awdheegle, waxayna mahdinayan in ay fashiliyan weerarka abaabulan, ee ay Shabaabku soo maleygeen.
Taliyaha Ciidanka Dhulka, General Odawaa Yuusuf Raagge ayaa ku waramaya in uu fashil ku soo dhammaaday isku daygii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dooneysay, in ay dib ugu qabsadaan gacan ku haynta Degmada Awdheegle.
Taliyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA-da ayaa sheegay in tani ay muujineyso sida uu Ciidanka Xoogga Dalka ugu diyaargarowbay dagaalka lagula jiro mintidiinta Al-Shabaab.
Dhanka kale, dagaalkan ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in lagu dilay saddex ka mid ah Ciidanka Xoogga Dalka iyo sawir-qaade ka tirsanaa Idaacadda Ciidanka Xoogga Dalka ee SNA.
Ururka Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkan ayaa waxay sheegeen inay ku dileen toban ka mid ah Ciidanka Xoogga Dalka, inkastoo aanay sheegin waxyeelada dhinacooda ka soo gaaray weerarkaasi.